Home Wararka RW Rooble Dalka ma Badbaadin Doonaa Misa Kuwa laga Badbaadinayo ayuu Ku...
RW Rooble Dalka ma Badbaadin Doonaa Misa Kuwa laga Badbaadinayo ayuu Ku Biiri Doonaa?
Inkastoo dad badani ay weli rajo muujinayaan haddana waxaa isa saoo taraya calaamado muujinaya in Farmajo iyo Fahad aysan marnaba ogolaan Karin inay dalka doorasho loo diyaariyo oo uu si hagaagsan u qabsoomo shirka lagu ballamay ee Afisyooni.
Falal gurracan oo midba uu ka kale ka daran yahay ayey sameynayeen marka laga soo bilaabo 1dii May oo uu Farmajo sheegay inuu hawlaha doorashada ku wareejiyey RW Rooble. Waxay Ururka AU soo magacabeen ergay ka dib markii uu Farmajo codsaday in loo soo diro qof dhexdhexadiya dadka Somaliyeed ee doorasho doonka ah, rabanna in lagu dhaqmo distuurka dalka iyo isaga oo Doorasho diid ah, rabanna inaan lagu dhaqmin distuurka oo uu iska joogo sidii Afawerki.
Farmajo iyo kooxdiisa waxay diideen haddana dhexdhexaadiyihii ay dalbadeen oo uu Farmajo tagay Congo iyo Afrikada dhexe, kadib markii ay ka cabsadeen inay dhici karto inuu si cadaalad ah wax u sameeyo taas oo keeni karta in distuurka lagu dhaqmo, taas oo ah waxa dhibaya kooxda Farmajo ee NN iyo dabadhilifyadooda.
Dhinaca kale, waxaa uu RW Rooble bilaabay inuu safarro aan loo joogin uu ku aado dibadda dalka iyadoo ay u yaallaan hawlo muhiim ah oo ah inuu dalka doorasho ka qabto, si uu taas u sameeyana waxaa uu u baahan yahay inuu qabto shirkii uu iclaamiyey oo ku aadan 20/5/21.
Si shirka uu miradhal u noqdo waxaa loo baahan yahay hawllo badan oo ka horreeya oo gogol xaar u ah shirka sida:
Inuu RW Rooble la hadlo dhammaan Madaxda DG si Meesha looga saaro waxyaabaha madmadowga ah ee jira, kadibna loo qoro ajendaha shirka iyo in meel la isla dhigga qaabka loo wajahayo ama loo xallinayo xaaladaha kala aragti duwanaanta ee shirka ee ka dhex dhalan kara.
In la sameeyo guddiyi Farsamo oo ay ahayd maalmaahan inay sii gogol xaraan soo diyaariyaan ajendaha.
In la diyaariyo ka hor shirka sidii loo abuuri lahaa jawi wanaagsan oo ay dadka Somaliyeed shirka u aamini karaan in sababta loo kulmayaa ay tahay sidii loo xallin lahaa dhibaatada hortaagan rabitaanka distuuriga ah ee shacbiga taas oo ah in dalka laga qabto doorasho degdeg ah oo aan August dhaafsiisneyn.
Waxaa soo baxaya wararka aan fiicneyn oo ah in RW Rooble uu hadda u liicayo cadaadis iyo cagajugleyn xoog leh oo kaga imanaysa dhinaca Farmajo iyo Fahad, kuwaan oo aan marnaba ogolaan Karin inay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ah sababahan dartood:
Haddii doorasho si xaq iyo caddaadlad u dhacdo la qabto waxay ka cabsi qabaan inay ku soo noqon waayaan talada dalka.
Haddii ay talada ku soo noqon waayaanna waxay ka cabsi qabaan in lagu soo oogo dacwado ku aadan dembiaydii dalka iyo dadka Somaliyeed ay ka galeen 4 sano ee tagtay sida dilalka qorsheysan , Xaasuuqii Baydhabo, Xasard Abukii iyo dagaalkii Jubooyinka oo ay dad ku dhinteen iyo Xamar oo ay Mucaaridka ku weerareen.
Labadaan qodob waxay ku khasbeysaa Farmajo iyo Fahad inay xataa ku dadaalaan in haddii looga guuleysto in doorasho la qabto in ay sameeyaan wax lagu illoobo debiyadoodii sida dagaal sokeeye iwm.
Horaba waxaa la bilaabay in Xamar lagu ugaarsado dhallinyaradii ka qeyb gashay ciidanka Badbaado Qaran waxaana meydkiisa oo si xun loo dilay la soo dhigay Dusiga Sare ee Boliiska Qashinqub ku yaalla askari NISA ka tirsanaa oo la oran jiray Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaannay Deeqow.
Arrintaan waa calaamad aan wanaagsaneyn oo dalka u wada halka ay la rabaan Farmajo iyo Fahad oo ah in askarigaan loo aaro halkaasna ay ka qaraxdo, waxayna isku dayayaan in ay sameeyaan waxkasta oo abuuri kara colaad iyo iska hor imaad. Waxaa qarax Saldhigga Waaberi lagu dilaay saraakiil yaryar oo ahaa hal doorka Boliska, iyadoo la sheegayo in rag madax ah oo la ogyahay inay Al shabaab la shaqeeyaan ay ku lug leeyihin dilkooda.
Cidda kaliya ee ka horjoogsan kartaa dalka khatarahan kooxdaan ay ku waddo waa RW Rooble oo fahma awooddiisa, dalkana u damqada oo “MAYA” ku yiraahda Farmajo, Fahad, Cabdisaciid iyo Jamaal si dalka uu u badbaadiyo. Haddiisa uu u muuqdo RW Rooble mid ku shaqeynaya rabitaankooda iyo ammaradooda Mucaaridka iyo Ciidanka Badbaado qaran waa inay dalka ka badbaadiyaan inuu dagaal galo oo xoog uga saaraan Villa Somaliya Farmajo, kadibna ka qaadaan tallaabada ay mudan yihiin kooxdaan iyo inta masuuliyadooda dayacday. Ugu Dambeynta su’aasha Taagani waa RW Rooble Dalka ma Badbaadin Doonaa Misa Kuwa laga Badbaadinayo ayuu Ku Biiri Doonaa?